रक्सी खानेलाई मात्र मासु! :: Setopati
कमलराज लम्साल जेठ १५
साहुजीले सेतो चामलको भात र सिमीको दाल दिए। अनि आलुको तरकारी। टिकाराम सरले 'मासु पनि दिनुस् न' भने। हिजो नाफामा सिंगै भाले खाएकाले मलाई मासु खाने मन थिएन। तै पनि हरियोपरियो नहुँदा खाना अलि खल्लो लागेको थियो, प्याज मागेर खायौं। बेलुकाको 'खानाअघिको सेसन'मा त्यहाँ अरूले थपीथपी मासु खाएका थिए। आजै लोती खोलामा मारेका माछा ल्याएर पकाएको पनि देखिएको थियो। तर साहुजीले माछा-मासु केही दिएनन्। जिउ बेस्सरी दुखेकाले खानापछि सिटामोल खाएर सुतेँ।
'आज त मज्जाले मासु भात खाइने भयो,' टिकाराम सरले सुनाए। मलाई भुटन मनपर्ने भएकाले बनाउन भनेँ। केहीबेरमै साहुजीले हामीलाई खाना खान बोलाए।
'भुटन पाक्यो नि' भन्दा त्यो त दिउँसोलाई हो भने। बिदाको दिन भएकाले दिउँसो होटलमा रक्सी खाने मान्छे आए। उनीहरूले भुटन पनि खाएछन्। त्यहाँ 'चाइनिज' रक्सी चर्चित रैछ। रक्सी नखाँदा हामीले मासु नपाएको भान भयो।
इन्टरनेट अवरूद्ध भएकाले हाम्रा कतिपय काम रोकिए। काम नभएपछि बेलुकीपख हामी गाउँमा 'क्यारम' खेल्न निस्कियौं। खेलेर सक्दानसक्दै कसैले दाइ भनेर बोलायो। उनी सबिता पाल थिइन्।
सलिसल्लामा भने भैंसी पालेको देख्यौं। दूधदही सोध्न जूनबहादुर सडक मुन्तिरको दोकानमा गए। 'छ' भनेपछि हामी पनि गयौं। एकएक बटुका दहीसँग कोदो र जौ मिसाएर पिसेको पिठोको रोटी र भाँगोको चट्नी खायौं। बिहानको ९ बजिसकेकाले भोक छिप्पिँदै थियो। अब कति हिँड्नुपर्ने हो? खाना कहाँ खान पाइने हो? केही थाहा थिएन।
सलिसल्ला हुम्ला कर्णाली र लोती खोलाको दोभान हो। सर्केगाढ हुँदै सिमकोट जाने बाटो यहाँबाट उत्तरतिर जान्छ। हामी भने कर्णालीसँगै पश्चिम लाग्यौं। सलिसल्लामा पक्की पुल भएको भए मोटर सजिलै चंखेली पुग्थ्यो। आकाशमा बादल आएकाले शीतल थियो। हिँड्ने बाटो सिधा। मोटर बाटो। नेपाली सेनाले ठाउँ ठाउँमा बाटो फराकिलो बनाउन 'ब्लास्ट' गर्दै थियो। अग्लाअग्ला भिरको मुन्तिर लुखुरलुखुर हिँड्दा हामी रोमाञ्चित भयौं।
नेरघाटनेर बिजुली निकालिएको छ। लघु जलविद्युत्। त्यहाँको बिजुली अग्लो पहाड चढेर उत्तरतिर गएको छ। बिजुली निकालेको ठाउँ मुगुको सोरु हो। बिजुली हुम्लाको सर्केगाड लगिएको छ। अन्तरपालिका समन्वय पनि लिजाको एउटा सूचक हो। हिजो फोनमा कुरा हुँदा सुरेन्द्रले 'नेरघाटसम्म गाडी पठाउन सकिन्छ होला' भनेका थिए। नेरघाट पुगेपछि भने गाडी आउँछ कि भन्ने लाग्यो।
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ १५, २०७८, १५:२५:००